Vectr: Nhọrọ ọzọ na Adobe Illustrator | Martech Zone
Vectr: Nhọrọ ọzọ na Adobe Illustrator
Vectr bụ n'efu ma kensinammuo editọ eserese eserese ngwa maka weebụ na desktọọpụ. Vectr nwere usoro mmụta dị ala nke na-eme ka onye ọ bụla nweta ihe osise. Vectr ga-anọ n'efu ruo mgbe ebighi ebi n'enweghị eriri ọ bụla.
Kedu ihe dị iche n'etiti Vector na Raster Graphics?
Vector dabeere ihe oyiyi bụ nke ahịrị na ụzọ iji mepụta onyonyo. Ha nwere mmalite, isi njedebe, na ahịrị n'etiti. Ha nwekwara ike ịmepụta ihe ndị jupụtara na ya. Uru nke onyonyo vektọ bụ na enwere ike ịhazigharị ya mana ọ ka na-eguzosi ike n'ezi ihe nke ihe mbụ. Dabere na Raster Ihe oyiyi nwere pikselụ na nhazi ụfọdụ. Mgbe ị na-agbasawanye ihe osise raster site na nke mbụ ya, a na-agbanwe pikselụ.
Chee echiche banyere triangle na foto. A triangle nwere ike inwe isi 3, ahịrị n'etiti, ma jupụta na agba. Ka ị na-agbasa triangle ahụ okpukpu abụọ, ọ na-eme ka isi atọ ahụ dịkwuo iche. Enweghị mgbagha ọ bụla. Ugbu a, mụbaa foto mmadụ buru ibu karịa okpukpu abụọ. Ga-ahụ foto ahụ ga - abụ ihe nzuzu ma gbagọọ agbagọ ka agba ụcha gbasaa iji kpuchie pikselụ.
Nke a bụ ya mere eserese na logos ndị chọrọ ka emegharịa nke ọma na-abụkarị ndị veto. Ma ọ bụ ya mere na anyị na-achọkarị nnukwu ihe oyiyi nke raster mgbe anyị na-arụ ọrụ na weebụ… ka ha wee belata naanị nha ebe enwere mkpaghasị ntakịrị.
Vectr dị na ntanetị ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ngwa maka OSX, Windows, Chromebook, ma ọ bụ Linux. Ha nwere ọgaranya set atụmatụ dị na map ha nke ahụ nwere ike ime ka ọ bụrụ ihe ọzọ na-agbanwe agbanwe na Adobe Illustrator, gụnyere nsụgharị agbakwunyere nwere ike ịbanye n'ime ndị editọ ntanetị.
Gbalịa Vectr Ugbu a!
Tags: obere maprasterraster vectorngwaeditọ eserese eseresevector na rastereditọ eserese eseresevectr